14. Waxaad aqbalaysaa in aad isticmaasho bulshooyinka bbc.co.uk (oo ay ka mid yihiin kooxaha fariimaha) si waafaqsan shuruucda bulshada ee soo socda. Arrintan, waxay quseeysaa dhamaan bbc.o.uk baraha bulshooyinka iyo adeegyada. Waa in aad, siday tahayba, aqrisaa shuruudaha qaybtaas u gaarka ah ama adeegyada aad isticmaalayso, maadaama ay dhici karto in ay waxyaabo ku kala duwan yihiin shaciyada bulshadu: Waxyaabaha aad soo gudbinayso Furahaaga BBC Badbaadada Baahida dhinaca sharciga ah Hadii aad ka yar tahay 16 sano Hadii aad jabiso sharciyada bulshada Waxyaabaha aad soo galinayso Waxa aad soo gudbinayso waa in ay noqdaan wax macno leh oo caadi ah. Lama ogola dhaqan carqaladayn, xadgudub iyo aflagaaddo: Waxyaabaha oo soo gudbinayso waa in ay ahaadaan kuwo waxtar leh oo si edeb leh loo qaabeeyay, lama doonayo wax xumaan loola jeedo ama ujeedku yahay in dhibaato lagu abuuro. Lama ogola arrimo sharci darro ah ama aan wanaagsanayn: Sharci darro, handadaad, ceebayn, aflagaadayn, hanjabaad, dhibaatayn, ceeb, xaqiraad, wixii galmo la xiriira (Sexually oriented), xadgudub dhinaca isirka, ama hadii kale wixii xun oo dhan lama ogola. Dulqaad yeelo: Waxaa dhici karta in shaqsiyaad kala duwan oo da' walba iyo awood kasta leh ay ka qaybgalayaan bulshada la xiriirta bbc.co.uk. Lama ogola qashin iyo wax ka baxsan mowduuca: Ma ogolaanayno soo gudbinta waxyaabo isku mid ah marar badan. Fadlan marar badan ha soo gudbin wixii aad nala wadaagayso hana u dirin wixii ka badan hal dood, ama ha soo dirin wax aan la socon mowduuca goobaha mowduucyada gaarka ah looga doodayo. lamana ogola xayaysiin iyo cid amaanid. Lama ogola qaribayaal: ???? Qodobada ku qoran wixii aan luqaddan ahay waxaa dhici karta in la tirtiro dhib ma lahase hadii sharciyada u degsan qaybta aad ku jirto ay ogol yihiin. Lama ogola iska dhigid qof kale Lama ogola magacyo aan haboonayn (sida: afxumo, daandaansi iwm) URLs (cinwaanada boggagga) oo kaliya waxaa la gudbin karaa goobta aad ku jirto hadii laga ogol yahay. Lama ogola qalad u isticmaalka adeegga cabashooyinka. Hadii aad ku adkaysato in aad sii waddo, tallaabo ayaa dhici karta in lagaa qaado oo lagaa xiro. Furahaaga BBC Hadii aad isticmaasho magacyo kala duwan oo ujeedkaagu yahay in aad koox arbushto ama ka caraysiiso isticmaalayaasha kale, waxaa dhici karta in tallaabo laga qaado dhamaan magacyada aad adeegsato. Dhamaan magacyada lagu furto boggaga waa in la diiwaangaliyaa oo lagu qoraa emailada shaqsi ee saxa ah, ee mar kasta qofku gali karo si emailo loogu diri karo. Magacyada la diiwaangaliyo iyadoo qof kale emailkiisa la isticmaalayo waa la xiri doonaa ogaysiin la'aan. waxaa dhici karta in looga baaho isticmaalayaasha in ay dib u xaqiijiyaan magacyada hadii ay nala noqoto in ay emailo aan rasmi ahayn ay ku furteen. BBC waxay xaq u leedahay in ay xirto magacyada lagu galo bogga hadii isticmaalaha la arko in uu adeegsanayo cinwaanno sii marid ah ee internet Protocl (Proxy IPs), Iyadoo la isku dayayo in la qariyo isticmaalka magacyo badan oo bogaga BBC lagu soo galo, ama hadii qof aan UK joogin uu iska dhigo uu joogo UK, ama uu si uun u arbusho howlaheena. (iii) Badbaadada Waxaan ku talinaynaa in aadan sheegin aqoonsigaaga shaqsi ama cid kale aqoonsigeeda (tusaale ahaan: number-ka telefoonka, cinwaanka boostada, cinwaanka guriga ama cinwaanada emailada ama faahfaahin kasta ee kale ee keenaysa in qofka si shaqsi ah loo aqoonsado) dhamaan bogga BBC. (iv) Sharciyada lagaaga baahan yahay Waa in aadan gudbin ama aadan dirin wixii meel ka dhac ah ama sharci daro ah noocii ay doonaan ha ahaadeene inta aad ku jirto bbc.co.uk Waa mamnuuc in aad wax ku biiriso bulshada bbc.co.uk, adigoo ujeedkaagu yahay in aad fal sharci daro ah ku kacdo ama aad dhiirigaliso. Waxaad ogolaatay in aad gudbiso ama la wadaagto bbc.co.uk howl aad adigu leedahay asalkeeda. Waa in aadan gudbin, ama aadan soo min guurin qof kale howshiisa, ama aadan ku xadgudbin xuquuqda BBC ama cid sadexaad oo ay ku jiraan shuruucda xuquuqda hal-abuurka, astaamaha, sirta ganacsi, xogta gaarka ah, is-shaacinta iyo xuquuqda shaqsi ama xuquuqda lahaansho. (v) Hadii aad ka yar tahay 16 sano: Fadlan waa in aad ogolaansho ka heshaa waalidka ama cidda mas'uulka kaa ah ka hor inta aadan ka qaybgalin mid ka mid ah bogaga bbc.co.uk Marna ha sheegin aqoonsigaaga shaqsi ama cid kale aqoonsigeeda. (Tusaale ahaan, iskuulka, number-ka telefoonka, magacaaga oo buuxa, cinwaanka gurigaaga ama cinwaanka emailka). (vi) Hadii aad jabiso shuruucda (bulshada) boggagga: Hadii aad ku guuldaraysato in aad raacdo shuruucda (boggagga) bulshada (iyo/ama kala duwanaanshaha sharciyada guriga ee goobta aad ku jirto) marka aad ka qayb qaadanayso boggagga bbc.co.uk, waxaa laguu soo dirayaa email kugu wargalinaya sababta loo diiday wixii aad gudbisay ama loo tifaftiray. Emailkan waxaa kaloo raacaya digniin ah hadii aad sii waddo jabinta sharciyada in ay dhici karto in ay keento tallaabo in laga qaado magaca ama magacyada aad isticmaasho. Tallaabadan, waxaa ka mid noqon kara wax kasta oo aad gudbinayso in la hubiyo ka hor inta aan loo ogolaan in bogga lagu daabaco ama in si ku meelgaar ah ama joogto ah loo joojinayo awoodda aad u yeelan karto in aad ka qaybgasho qaar ama dhamaan boggagga ee bulshooyinka bbc.co.uk Hadii aad gudbiso ama aad la wadaagto qodob aan haboonayn ama daandaansi ah mid ka mid ah boggagga bulshooyinka bbc.co.uk ama meel kale oo isla bbc.co.uk ama hadii kale aad gasho howl qalalaase ah oo laga sameeyo bbc.co.uk, BC waxay u arkaysaa tallaabadaas mid qatar ah iyo/ama lagu celiyo, BBC waxaa dhici karta in ay adeegsato wixii war ah ee ay heli karto ee kugu saabsan si ay u joojiso in aadan u gaysan xadgudubyo kale. waxaa tallaabadan ku jiri karta in la wargaliyo qaybta sadexaad sida shirkadda aad u shaqayso, school, email-kaaga cidda fasaxdau oo loo sheego xadgudubka aad ku kacday. BBC waxay xaq u leedahay in ay tirtirto wixii aad soo dirto, ama ay tallaabo ka qaaddo magaca aad ka samaysatay BBC, waqtigii ay doonto iyo sabab kasta ha ahaatee. Iska fogaynta iyo xadidaadda mas'uuliyadda
20. Guuldarada iyo dib u dhaca BBC in ay fuliso xuquuqda ku qoran shuruudahan ma aha in ay meesha ka saarayso in BBC ay xaq u leedahay in ay dhaqangalinayso shuruudaha. 21. Shuruudaha waxaa xukumaya oo lala fasirayaa sharciga England iyo Wales, oo leh awood sharci oo ka saraysa wixii lagu murmo. British Broadcasting Corporation © 2002-2007 Broadcasting House, Portland Place, London, British Broadcasting Corporation © 2002-2007 Barnaamijyada Widgets In aad soo dajiso barnaamijka (software-ka) ee la adeegsan karo ("BBC Widget") oo aad dhigto shaashadda Compuyter-ka si aad ugu adeegsato xogta BBC ("BBC Content"), waxaad ogolaatay shuruudaha hoos ku qoran. Shuruudaha barnaamijyada Widget 3.Ogolaashaha iyo Mas'uuliyadda 3.1 Barnaamijka BBC Widget iyo xogta BBC in loo soo bandhigo "sida ay tahay" iyo "sida loo heli karo" ee loo soo dajiyay, degso oo isticmaal BBC Widget, kana gal xogta BBC, balse adigay kuu taal dhibkii kaaga yimaada. 3.2 BBC taxadar intii macquul ah way samaysay in ay xaqiijiso in barnaamijka BBC Widget iyo galidda xogta BBC aysan lahaanin wax qalad ah, virus ama cilado, hase yeeshee BBC ma ballanqaadayso in xaalku mar walba sidaa yahay. 3.3 Ilaa intii sharcigu ogol yahay, BBC ma ogolaanayso nooc kasta ha ahaadee, ee la xiriira BBC Widget, Xogta BBC ama Boggaga BBC, BBC mas'uul kama noqonayso wixii kaa lumo marka aad gasho barnaamijka BBC Widget ama xogta BBC. 3.4 Waxaa talo laguugu siinayaa in aad qaado dhamaan tallaabooyinka loo baahan yahay si aad uga difaacdo computer-kaaga in virus uu soo weeraro. 3.5 BBC waxaa dhici karta in ay badasho ama meeshaba ka saarto Xogta BBC si iskeed ah, ayna xayirto isticmaalka BBC Widget hadii la jabiyo shuruudahan isticmaalka. Guud ahaan Shuruudaha ku xiran isticmaalaha waxaa lala fasirayaa sharciyada England, waxaana ay hoos tagayaan shuruucda maxkamadaha England.